Imifanekiso eqingqiweyo yemibala emarmore yaseChina eyenziwe ngomatshini kunye nemveliso | Ubugcisa obufanelekileyo
Inombolo yomzekelo: FMI-219
Ubukhulu: ubungakanani esingabizi
Isixhobo: iMarble yendalo
Ihashe elihle elinemilenze emine elingqingqwa kwaye lilungelelaniswe kakuhle. Umzimba ugudile kakhulu, ngokungathi ineoyile kwaye iyakhazimla. Izinwele entanyeni zixhomekeke phantsi ngokulandelelana.
Zombini iindlebe zihlikihliwe, zimamele intshukumo ejikelezileyo nangaliphi na ixesha, ngokungathi zime. Amehlo amabini amakhulu ahlala ejikeleza kufutshane, umsila omde ngamanye amaxesha ujinga phantsi, ngamanye amaxesha ujika ujike uye ecaleni, kwaye imilenze emine ende ijongeka njengeentsika ezine ezishinyeneyo ezinamandla amakhulu.
Ihashe laseArabhiya luhlobo lwakudala noluxabisekileyo lwamahashe emhlabeni. Ukumbiwa kwezinto zakudala kwafumanisa ukuba bavela kwiminyaka engama-4 500 eyadlulayo, bevela kwiPeninsula yaseArabia. Ikhethwe ngononophelo kwaye ikhule ixesha elide phantsi kweemeko zembalela, imvula encinci kunye nokunqongophala kokutya. Eli hashe lidlale indima ebalulekileyo ekwenziweni kweentlobo ezininzi zehashe kwihlabathi. Ukucwangciswa kwamahashe, amahashe e-Orrov, amahashe kaMorgen, njl., Zonke zineligazi lamahashe aseArabia.
Ihashe eliphakathi linama-vertebrae angama-24, ngelixa ihashe laseArabia linama-23 kuphela. Intloko incinci kwaye icocekile, amehlo makhulu kwaye aqaqambile, intamo ithe nkqo, ibunzi libanzi, isikrweqe siphezulu, umqolo kunye nesinqe zifutshane kwaye omelele, amathambo ayabhitya kwaye aqinile, imilenze ibhityile, imisipha iyaphuhliswa, kwaye umzimba womile, idyasi ithambile njenge silika, kwaye amandla okuzala nawo omelele. ubomi obude. Isakhiwo somzimba silinganiswe kakuhle kwaye sihle. Eli lihashe elikwinqanaba eliphezulu elinokhuphiswano olukhethekileyo lwamahashe eArabhiya. Isantya somgama omfutshane asifanelekanga njengesiNgesi, kodwa umdyarho omde ulungile. Ngenxa yokubonakala kwayo kakuhle kunye nobuchule obomeleleyo, ezinye iintlobo zixhomekeke ekungenisweni kwamahashe aseArabhiya ukuphucula inkangeleko yazo kunye nokwenza ngcono amandla.
Amahashe aseArabia aguqukile kwaye akhule kwimozulu esentlango. Zithathwa njengobutyebi ngamaBedouins. Bahlala basiwa ezindlwini kwaye bakhuselwe ezintenteni. Ngenxa yolwalamano olusondeleyo nabantu, banobubele, banengqiqo kwaye bakulungele ukukholisa. Banenqanaba eliphezulu lamandla engqondo kunye nokuphaphama, kwaye bakulungele uhlaselo kunye nemfazwe. Ngenxa yolu dibaniso lokuzimela kunye nobuntununtunu, abanini-mahashe bama-Arabhu banamhlanje kufuneka bahlawule umonde owaneleyo kunye nembeko yokubalawula.
Le ndedeba intle yaseArabia inobungangamsha kwaye intle, iboniswe ngemabhile entle exubeneyo. Umsebenzi wobugcisa odalwe leli gcisa uneenkcukacha ezigqwesileyo kunye nobunyani obugqibeleleyo. Ngesiseko esixande njengemvelaphi, yongeza kwangoko kumhombiso wakho wangaphandle.
Egqithileyo Imifanekiso eqingqiweyo yemarble emarmore emhlophe eqingqiweyo iyathengiswa
Okulandelayo: Umgangatho olungileyo umbala omhlophe weMarble Horse
Umbala wepinki uhamba ngengonyama yengonyama ethengiswayo
I-White Marble Winged Statue enezibane ezithengiswayo
Imifanekiso eqingqiweyo yemabhile emnyama emhlophe.
I-White Marble Lion Statue yoSapho yeZilwanyana ...
Imifanekiso eqingqiweyo eNkulu yeMarble eMhlophe eneBhola eqingqiweyo ...
Imifanekiso eqingqiweyo entle enemibala emhlophe ...